Azụmaahịa Email nwere ọgụgụ isi na-akpali ntụgharị
Ọ bụrụ na gị inbound marketing akọwapụtara dị ka olulu, aga m akọwa ahịa email gị dị ka akpa iji jide ndị ndu na-ada. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-aga na saịtị gị ma soro gị rụọ ọrụ, mana ikekwe oge erubeghị ịtụgharị.
Ọ bụ naanị akụkọ, mana m ga-akọwa usoro nke m mgbe m na-eme nyocha ma ọ bụ zụọ ahịa n'ịntanetị:
Nga-azụ - Aga m enyocha weebụsaịtị na soshal midia ịchọta ọtụtụ ozi m nwere ike gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a.
Research - Aga m emechaa pịa ụlọ ọrụ ahụ ihe iji hụ na ha dị ka ndị ziri ezi na m ga-achọ azịza nye ajụjụ ụfọdụ m nwere ike inwe tupu ịzụta.
Na-abanye - Ọ bụrụ na enyere gị ohere iji banye maka ozi ndị ọzọ, m na-eme. Maka ngwaahịa sọftụwia, nke a nwere ike ịbụ akwụkwọ ọcha ma ọ bụ ihe ọmụmụ. Maka e-commerce, nke ahụ nwere ike ịbụ koodu mbelata ego.
mmefu ego - Adịghị m emekarị zuo n’oge ahụ. Ọtụtụ mgbe, ọ bụrụ na ọ bụ azụmahịa m ka m na-atụle zụọ na ndị mmekọ m na-eche ruo mgbe ọ bụ ezigbo oge itinye ego site na echiche ego. Ọ bụrụ nzụta nke onwe, enwere m ike ichere ruo ụbọchị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe m nwere ụfọdụ isi dị njikere ịgbanwe zụọ maka.
zuo - Site na nyocha ịzụrụ, aga m anọghara ịhapụ ozi ịntanetị ịzụ ahịa azụmaahịa ma ọ bụ ozi ntanetị nke ngwaahịa. Ma mgbe oge ruru, aga m aga n'ihu zụta.
Ekwetaghị m na omume ịzụ m dị iche na nke ọtụtụ ndị na-eri ma ọ bụ azụmaahịa n'ahịa ahịa. Email Marketing na-enye ohere kachasị mma ịbịaru ndị folks ahụ hapụrụ, gbahapụ, ma ọ bụ ghara ịga na obere oge ka ị nwee ike dọghachi ha n'ime ụlọ ahịa gị.
Mgbe okenye, usoro na-enweghị usoro na usoro ọgbụgba ọkụ na-eme ka ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa mechie azụmahịa ahụ, usoro ọrụ akpaaka ọhụụ na-enye ikike na-enweghị ngwụcha maka ịkọwa usoro nkwukọrịta iji melite ọnụego mgbanwe niile.
E nyefere ozi a site na Email, Otu esi eji usoro otutu Email mee ka otutu ndi mmadu gbanwee, na-enye atumatu ato iji nwekwuo nsogbu nke nkwalite email gi na-eme ka ndi mmadu gbanwee:
Isiokwu ma ọ bụ Isiokwu Series - Melite usoro ozi ịntanetị bara uru iji kụziere onye ahịa gị ma ọ bụ onye ahịa gị ngwaahịa na ọrụ ị na-atụ anya ịgbanwe ha. Nịm na-atụ anya ozugbo na gị nwepu-inyinye na isiokwu akara. Ihe Nlereanya:
Usoro 1 nke 3: Increbawanye Nchigharị na Email Marketing
Nsogbu + Na-ekwupụta + dozie - Gosi ihe mgbu nke nsogbu na-esote usoro ozi ịntanetị nke na-akụzi onye ahịa nwere ike ịnwe nsogbu ahụ na ngwọta ya. Anyị na-eme nke a site na ịchọta data na-akwado ndị ọzọ dị ka akụkọ nyocha, ma ọ bụ nkwupụta ndị ahịa nke mbụ. Ọ bụ ezie na onye ahịa gị nwere ike nwee nsogbu ha na-edozi, ime ka ha mata ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ahịa nwere otu okwu ahụ na otu ị siri dozie ya ga-eduga ha na mkpebi ịzụta. Inweta usoro nke ozi-e nke na-echetara ha nkụda mmụọ ha bụ ụzọ dị mma iji chụga ha na ntụgharị! Ihe Nlereanya:
Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke azụmaahịa na-akọ na mmejuputa mgbanwe mgbanwe nke okpu
Usoro Ohere - Kama ilekwasị anya na nsogbu na azịza gị, atụmatụ a na-etinye nchekwube banyere ọdịnihu. Na ngwanrọ nke ụlọ ọrụ, a na-ejikarị usoro eji eme ihe nke na-akọwa ohere nke ihe enwere ike inweta site na itinye ego na ikpo okwu. Ihe Nlereanya:
Abamuru nke amepụta Platform Ndị Ahịa Maka Ndị Na-enye Ahụike
Echefula ime ka ihe kacha mma Onye ọ bụla email
Mepụta usoro ahụ abụghị akụkọ niile… ịkwesịrị ịkwalite ọdịnaya ahụ, hazie ozi ịntanetị ahụ, zipu ọdịnaya ezubere iche na mpaghara ahịa ọ bụla, ma bulie peeji ọdịda nke onye ahịa gị nwere ike ịbịa.
Ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ dị ukwuu banyere mmetụta nke optimizing email ọdịnaya site na SoftwarePundit:
Ọdịnaya na ihe oyiyi dị mkpa nweta echiche 94% karịa, yabụ gbaa mbọ tinye ihe onyonyo dị mkpa iji gosipụta data, usoro, ma ọ bụ akụkọ ndị ahịa iji bulie njikọ aka. GIF ndị na-eme ihe nkiri nwekwara nnukwu ohere.
Imeziwanye ruru ntị na ozi ịntanetị na ibe ọdịda nwere ike ime ka mgbanwe site na 31% mụbaa. Ntị Ntị bụ oke njikọ dị na peeji nke ọdịda na ọnụ ọgụgụ nke ebumnuche ntụgharị mgbasa ozi. Na mgbasa ozi kachasị mma, Usoro Ntị gị kwesịrị ịbụ 1: 1.
Ekekọrịta email mkpọsa mepụta 30% mepere emepe na 50% karịa pịa-throughs
Iwepu a menu igodo na peeji nke ọdịda gị nwere ike iwelie ntụgharị site na 100%
Guo Ule A / B na ihe omumu banyere ihe omuma
Tags: agbahapụ ịzụ ahịanjikarịcha ntụgharịmgbanweemailntughari emailemail imeweemail njememail usoroemail atụmatụinfographicmonetateịpụ na